सिंगापुरको सातौं विकेट पतन, ललितको नाममा तेस्रो विकेट ! [LIVE] - Everest Dainik - News from Nepal
सिंगापुरको सातौं विकेट पतन, ललितको नाममा तेस्रो विकेट ! [LIVE]
काठमाडौं, भदौ १७ । एसिया कप छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत अहिले नेपालले आफ्नो चौंथो खेलमा सिंगापुरसँग खेलि रहेको छ । टस हारेर फिल्डीङको मौका पाएको सिंगापुरको सातौंं विकेट पतन भएको छ । उसको छैटौं र सातौं विकेटका रुपमा ललितनाराण राजवंशीले विकेट लिएका छन् । योसंगै आज ललितको खातामा तीन विकेट भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेपाली क्रिकेट टोली युएर्इ प्रस्थान
सिंगापुर ३३ ओभरको खेल सकिदा ७ विकेट गुमाउँदै १३३ रन बनाएर खेलि रहेको छ । यसअघि नेपालका लागि सोमपाल कामीले २ र पारस खड्का र सन्दिप लामिछानेले समान १-१ विकेट लिइसका छन् ।
लाइभ स्कोर हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्
याे पनि पढ्नुस आज नेपालको दोस्रो एकदिवसीय खेल, कस्तो आउँला नतिजा ?
यहि सेप्टेम्बर १५ तारिकबाट संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई) मा सञ्चालन हुने एसिया कपको छनौटका लागि नेपाल सहित अन्य ६ टोलीले छनौट प्रतियोगितामा भाग लिंदै छन्।प्रतियोगितामा आयोजक मलेसिया, नेपाल, युएई, हङकङ, ओमान र सिंगापुर भिड्दै छन्। यस प्रतियोगिताको बिजेताले एसिया कपको समुह ‘ए’ मा रहेर भारत र पाकिस्तानसंग समुह चरणमा न खेल्ने मौका प्राप्त गर्नेछ।
याे पनि पढ्नुस नेपाली क्रिकेट टिमलार्इ अर्को ठूलो मौका, भारतले बोलायो वान-डे खेल्न !
ट्याग्स: Lalit Rajbansi, Nepal Vs singpur, nepali cricket team